musha South AMERICA FOOTBALL STORies Vanotamba Nhabvu Vanotamba Juan Foyth Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhola Genius iyo inozivikanwa nezita racho "Juan". Yedu Juan Foyth Childhood Indaba pamwe neS Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira mhuri yake, nyaya yeupenyu musati mazita, kusimudzirwa mukurumbira nyaya, ukama uye hupenyu hwehupenyu.
Hongu, munhu wose anoziva kuti ndiye mudziviriri wakakwana. Zvisinei, vashomanana chete vanofunga nezveJuan Foyth's Biography iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekuita, ngatitangei.
Juan Foyth Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts- Upenyu Hwokutanga & Mhuri Yacho
Juan Marcos Foyth akaberekwa musi weChina waJanuary 12 kuvabereki vake Mai naamai Ariel Foyth muLa Plata, Argentina nzvimbo yekuzvarwa Juan Sebastian Veron.
Waizviziva here? Mhuri yaJuan Foyth ndeyePolish Argentines inoreva kuti ivo vagari veArginia vane rusarura poricha madzitateguru.
Mhuri yeFoyth inobatanidza mamwe mhuri dzePoland dzinoumba vashoma muArgentina. Vose amai vake nababa vose vanobata mapasipoti echiPolish uye zvinonzi zvizvarwa zvake zvakare zvakasvika kuArgentina pakati pe1919 ne1976.
Juan akakurira mumhuri ine vana vaZero. Yaiva chete iye, amai vake, baba uye hama. Haana kumbova nekamwe yezvinhu zvine hama kana hanzvadzi ingave yakafanana. Semukomana muduku, Juan akave nerudo rwakakwana uye kutarisirwa kubva kuvabereki vake kunyanya amai vake.
Kusiyana nevana vakawanda vasina vana, tpano kwakanga kusina matoyi kana mitambo apo Juan aive muduku. Zvose zvaaida zvakanga zviri bhora chete sechipo kubva kuvabereki vake. Izvi zvakabatsira kugadzirisa chikepe kune rwendo rusinganzwisisiki rwebhora rehupenyu hwake.
Juan Foyth Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts- Basa Rokutanga BuildUp
Juan Foyth akakurira kwete kungofarira kutamba muItaly League asi achiyemura Rio Ferdinand uyo waakaona sechiso chake chekutanga chebhora. Rudo rwaRio Ferdinand rwakatamiswawo ku "Mutambo we play station"Iyo yaaida kusvikira nhasi. Kutaura nezveRio Ferdinand uye Dreamcast. Juan kamwe akati;
"Ndiri kutamba Playstation uye pandinenge ndichitamba neshamwari ndingati 'Ndiri Rio Ferdinand'
Juan Foyth Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts- Basa Rokutanga Upenyu
Rudo rwaJuan Foyth rwemutambo rwakamubvumira kunyoresa mukirasi reboka revechidiki rainzi ainzi Estudiantes avo vaiva nehondo yavo yepamusha uye yaimbova Manchester United Star, Juan Sebastián Verón sachigaro wekambani.
Paaiva pachikwata, akanga ane ngirozi yekuchengetedza, mutana wechidiki wechidiki uyo akamuchengeta sezvaaiva mwanakomana wake.
Pakutanga, Juan Foyth akambotanga semutambo wekurwisa. Iyi ndiyo nguva yaaishandura mienzaniso kuburikidza nokutora Ricardo Kaka sechifananidzo chake. Zvisinei, rudo rusingaperi Rio Ferdinand akamuita kuti apedze kuenda kunzvimbo yake yepamusoro yekudzivirira asati atora 16. Mugore 2017 akaona Juan achibvumirwa kutamba mutambi webhupu yepamusoro.
Juan Foyth Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts- Simuka Mukurumbira
Zvinhu zvakatanga kutora boka reEstudiantes guru sezvo Juan Foyth achangotanga kupinda muchikwata. Mitambo minomwe iyo yaakakwira yeboka rakakura yakavadzinga team muCopa Libertadores nzvimbo. Mumwaka iwoyo iwoyo, Juan Foyth akaendeswa kune rimwe boka rechidiki apo akabatsira kutora nyota yeboka.
Kubwinya kwaFoyth neboka reEastudiantes vatungamiri vakafambisa vateveri kumuziva semhepo inokura. Akanga ari mumwe munhu anonyatsotarisana nebhora ane huwandu hwakawanda hwekupfuura uye hunofa.
Kunyange vatambi vemahombe vakashamiswa nezvavakaona kuJuan. Nhau dzemwana aive akanaka kwazvo nebhora patsoka dzake, akanyarara uye akadzikama, akasimba, anofadza uye ane utsinye akauya kuEurope panguva iyoyo.
Hazvina kutora nguva nguva iyo Argentine yakarongwa zvikuru yakatanga kuona vachengeti vashanyira kumba kwake kuti vatange hurukuro nevabereki vake uye nhengo dzemhuri dzakawanda uye kunyanya kukosha, Veron.
Zvanga zviri Sebastian Veron uyo akazoshanda kutengesa kwake nekupa Juan Foyth mune zvaainzi "Maoko Akachengeteka"Iyo iri kutaura nezvevanhu vomunharaunda yavo uye yekare yaive pamwe navo, Mauricio Pochettino.
Jaya Juan Foyth akazobatana nechizvarwa chechidiki chevatambi izvo; Frenkie de Jong, Kasper Dolgerg, Christian Pulisic uye Ruben Neves avo vanogona kutonga mutambo pasina nguva. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Juan Foyth Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts- Ukama Hupenyu
Mutevedzeri wese weWAG anoda kutarisa sevanamwarikadzi vechiGiriki vane kunaka kwavo kunogona kufadza uye kuisa varanda vavo boyfriends nevarume. Izvi, zvisinei, hazvisi nyaya yaAriana Alonso uyo unhu hwakanaka hunokonzera kusarasikirwa kwavo.
Juan Foyth akasiyana uye haafariri C Ronaldo or Gerard Pique. Icho chinonzi bloom kutanga chakaratidza kunyika kuti iye anowanzoita 21st-muzana remakore remakore uyo asina kumbobviswe nekutarisa kwemusikana.
Ariana uyo Juan Foyth anorondedzera se "Mhandara Yakaoma" ndeyekuda basketball uye fan guru kune mukomana wake.
Mushure mekuona bhodhi dzake dzebhodhi dzepamusoro dzave dzikaitika, Juan Foyth akasarudza kuita chisarudzo chakasimba chekutsanangurira mwana wake sweetheart.
Kunyange zvazvo angave ari kuwana $ 18,000 kwevhiki, Zvisinei, mararamiro aJuan Foyth muLondon akaratidza kuti mari inogona kuumba maitiro akanaka uye kuchinja zvinhu.
Juan Foyth Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts- Upenyu hwehupenyu
Kuziva hupenyu hwehupenyu hwaJuan Foyth huchakubatsira kuwana mufananidzo wakazara pamusoro pake.
Juan Foyth mumwe munhu anoda kutarisira nguva yake uye ane mutoro mukuru. Kubva pabhoza kusvika muupenyu hwake, Juan ndiye munhu asingambokanganwi kwaanobva uye akabhadhara mari yake kune shamwari dzake kumusha.
Juan anoziva nzira yekuenzanisa upenyu hwake hwehupenyu uye hwehutano. Kazhinji, anosarudza kupedza nguva yake nemutungamiriri we PlayStation mumaoko ake asingatambi mimwe mitambo kupfuura FIFA.
Kutaura pamusoro pevhodhi vanofarirawo mutongi, iwe unogona kufunga izvozvo Hector Bellerin yaizoita zvakawanda FIFA. Iwe wakave wakazviwana zvakashata. MuSpain anodawo Call Of Duty.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinovonga nekuverenga yedu Juan Foyth Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.
Tanguy Ndombele Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Ryan Sessegnon Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Kyle Walker-Peters Childhood Nyaya Yekuwedzera Plus Untold Biography Facts
Ben Davies Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Harry Winks Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Moussa Sissoko Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
Kieran Trippier Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts
Peter Crouch Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts